Ndingayinceda njani kwiinkonzo zokulungiselela i-website?
SEO (ukuphuculwa kweenjini zothungelwano) yindlela efanelekileyo yokwenza iwebhusayithi ibonakale kwi-SERP. Le nkqubela yeenkqubo zokuphuculwa kwe-off-and-site isenza abanikazi beendawo bakwazi ukuphakamisa phezulu kwi-Google, Bing, Yahoo, kunye nezinye iinjongo zophando. Okuphakamileyo kuwe, i-traffic more you get. Ubuninzi bezothutho kuthetha ukuguqulwa okukhulu nokuthengisa. Umsebenzisi ongcono ngakumbi ufumana ukusebenza kunye nesiza sakho, amathuba amaninzi lo msebenzisi uya kuguqula kuwe ukuhlawula umthengi. Ngoko, ngokwenza i-injini yokukhangela i-intanethi, unikezela ixabiso kubaxumi bakho, kwaye ngexesha labo libonelela ngexabiso - estudiar fotografia en chile. Ukuphuculwa kwewebhusayithi esemgangathweni kubandakanya abaphandi bezekhredithi, ukuphicothwa kwe-intanethi, ukukhethwa kwegama elingundoqo, ukuphuhliswa kokuqulunqwa kweziqulatho kunye nejusi yekhonkco. Zonke ezi zenziwe zenziwe ukwenza ukuba abathengi bakwazi ukufumana umthombo wakho wewebhu phakathi kwezigidi ze-website ze-niche ezihlobene. Ngokwezibalo zedatha, malunga ne-90% yabasebenzisi baqhawula ikhonkco kwiphepha lokuqala le-SERP njengoko bacinga ukuba le mihlaba ihambelana nemibuzo yabo kwaye inezinga eliphezulu. Kwaye kunjalo. Ngokutsho kwe-Google algorithms, ixabiso eliphezulu kuphela kunye newebhusayithi ezihloniphekileyo zifanelwe ukuba zibe kwindawo yokuqala kwikhasi lesiphumo. Ngoko ke makhe sixoxe ngeenkonzo ezinokuthi zithuthukise indawo yethu ye-intanethi kwaye zifumane iiwebhusayithi zethu kwiindawo eziphezulu zeGoogle.
Ukwakha i-SEO campaign , kufuneka ukwazi ukuba abaqhubi bakho bakhula njani ishishini labo kwi-intanethi. Ufanele ukwazi ukuba yeyiphi iinkampani kwi-market yakho ye-market ejolise kwii-keywords ezifanayo kunye nokufikelela kubathengi bakho. Ngaphezu koko, kufuneka ukwazi ukuba yiyiphi indlela yokwenza ubuchule obuyisebenzisayo ukuphucula izikhundla zabo. Leli thuba elihle kakhulu kuwe ukuba ugxininise amanye amacandelo aluncedo kumkhankaso wakho wokuphromotha. Kufuneka uhlalutye amaphupha abuthathaka kwaye anamandla okhuphiswano lwakho ukuze ukwazi ukukhuphisana nabo.
. Ingundoqo yesikhankaso sakho sokwenza umsebenzi okhokela onke amanyathelo akho alandelayo. Ukwakha umkhankaso we-SEO kwaye ujolise abathengi bakho abanakho, kufuneka uqaphele amagama abalulekileyo abasebenzisi abangayisebenzisa xa befuna iimveliso okanye iinkonzo zakho.Ukuba uqhuba uphando lwegama elingundoqo, uya kuba nakho ukuvelisa ukubuyela okuphezulu kwi-mali. Qinisekisa ukuba amagama akho angundoqo awanako ukukhuphisana kakhulu kunye nomsila omde ukukwazi ukuncintisana nabadlali be-SEO abahlala ixesha elide.
Isakhiwo sokwakha siyinxalenye ebalulekileyo yokuphuculwa kwesayithi. Inani lemithombo ebonisa indawo yakho inqume igunya layo nedumela. Udinga ukutsala iikhonkco zekhwalithi ukuphucula i-website yakho. Qinisekisa ukuba ufake izikhonkco zakho ezifanelekileyo kwaye zihambelana neenkalo zakho ze-niche. Ngaphezu koko, kufuneka uquke umgca kwizinto ezizodwa kunye nokubandakanya umxholo wokukhuthaza abasebenzisi ukulandela indawo yakho ukuze uthole ulwazi oluninzi. Ikhwalithi yokwakha kunye neekhonkco ezichaphazelekayo ezivela kwezinye iiwebhusayithi yinkqubo echitha ixesha kunye neyinkimbinkimbi efuna umzame nomonde.